Graava: Igwefoto vidiyo nwere ọgụgụ isi na-edezi na akpaghị aka | Martech Zone
Fraịde, Ọgọstụ 7, 2015 Douglas Karr
Na 2012 Bruno Gregory nwere ụgbọ ala kụrụ ka ọ na-agba ịnyịnya ígwè ya. Onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ hapụrụ ndị ahụ hụrụ mana Bruno nwere ike ịchọpụta ma mee ka onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ nwee ikpe n'ihi na o nwere igwefoto nke dekọrọ ihe omume ahụ. N'afọ sochirinụ, ọ bịara n'echiche nke iji igwe mmetụta na mmụta igwe iji mepụta igwefoto na-akpachapụ naanị ihe omume dị mkpa karịa ịdekọ ọtụtụ vidiyo na-enweghị isi, wee gafee ya iji dezie ọnụ oge dị mkpa.
Ihe si na ya pụta Graava, igwefoto di elu (1080p 30fps) nke gunyere GPS, Wi-Fi, Bluetooth, accelerometer, ihe nkpu gyro, microphones 2 di elu, ihe onyonyo ọkụ, ihe onyonyo onyonyo, okwu okwu na obuna onye nlere obi obula. Igwefoto na-eguzogide mmiri ma nwee oghere micro SD na micro HDMI oghere.
Nke a bụ ihe ngosipụta nke etu Grava si ekpebi vidiyo iji chekwaa
Ma lee ihe kacha mma 30 sekọnd, jikọta ya na egwu site na ngwa ahụ.
Ngwa Graava na-enye gị ohere ịkekọrịta vidiyo gị, kwado ha, chịkwaa igwefoto ahụ nke ọma, ma jikwaa ntọala igwefoto.
Tags: igwefoto +gravaVidio Ahịaihe ndekọ vidiyo